आइतबारसम्म कुन-कुन जिल्लामा देखियो सलह? – Radio Bageshwori FM 94.6 MHz
आइतबारसम्म कुन-कुन जिल्लामा देखियो सलह?
रुपन्देही, बारा र पर्सा जिल्लाबाट शनिबार नेपाल प्रवेश गरेको सलह किराको फौज एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा फैलिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भैरहवा, पाल्पा, स्यांजा, सिन्धुली, रामेछाप, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेलगायत जिल्लामा फैलिसकेको जानकारी दिएको छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुँमागाईंले भैरहवाबाट बुटवल हुँदै पाल्पा र स्याङ्जासम्ममा सलह फैलिएको बताए।
त्यस्तै सिन्धुलीमा पुगेको झुण्ड चियाबारी क्षेत्रतर्फ पुगेको छ भने पर्सामा निकै सानो झुण्डमात्रै पुगेको छ। पाल्पाको दोभानमा सलह पुगेको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएको छ। रामेछापको केही स्थान, चितवनको राष्ट्रिय निकुन्ज, भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा फैलिएको छ।मकवानपुर पालुङ र काभ्रेको फलामेटार क्षेत्रमा सलह देखिएको छ। यी दुई जिल्लाको सीमाना क्षेत्रमा सलहका झुण्ड देखिएका छन्। शनिबार बारामा देखिएको सलह त्यहाँ सामान्य क्षति गरेर जिल्लाको सैनामैना क्षेत्र हुँदै पश्चिमतिर उडान भरिरहेको छ।
रिब दुई दर्जन जिल्लामा सलह फैलिइसक्दा पनि नियन्त्रणमा सरकार अझै अलमलमा देखिएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार सलह प्रायजसो ५० देखि एक सय वटाको समूहमा देखिएको छ । ठूलो
समयमै पानी परेका कारण यस वर्ष असार १५ अगावै बाँकेमा ४० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । सिँचाइ सुविधा नहुँदा हरेक वर्ष आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य बाँकेका कृषकहरुले यस वर्ष भने समयमै धान रोपाइँ सुर
समाज २४ ग्राम ब्राउनसुगरसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
न्युज बाँके जिल्लामा नयाँ प्रहरी प्रमूख : के एसपी रानाले आफ्नो साँख जोगाउलान् ?